Sibheka isimomnotho saleli sonto – Bayede News
Iningi labantu liyayibuka ithelevishini futhi liyawulalela
by Bayede-News Posted on 16 September 2019 25 September 2019
IJohannesburg Stock Exchange Isithombe: Capital Markets in Africa
Iningi labantu liyayibuka ithelevishini futhi liyawulalela umsakazo. Kuyenzeka uthi ulalele noma uyabuka ugcine ungabonanga lutho futhi ungezwanga lutho ngoba ingqondo beyisukile kulokho obekwenzeka. Kwesinye isikhathi lokho kwenzeka ngenhloso ngoba umuntu engasiboni isidingo sokulalela noma abuke lokho okwenzekayo. Abanye bayawuvala umqondo ngoba bezibuza ukuthi kusizani ukulalela noma ubuke into ongazi ukuthi iyokusiza kuphi.
Yilokhu okuyaye kwenzeke uma kukhulunywa ngomnotho. Iningi lethu alizwa futhi aliboni ukuthi lihlanganaphi nedola noma umnotho wakwamanye amazwe. Kubalulekile ukuba uzinike isikhathi uvumele le ngosi ikubekele lokho ngendlela ezwakala kangcono ngolimi lwakho nangezibonelo ezijwayelekile. Umuntu uma ekwazi ukubala imali kumele akwazi futhi ukubala abone ukuthi yini edla imali yakhe iphele ngamandla kanti kwesinye isikhathi ithathe isikhathi ukuphela. Usuku nosuku alufani nolunye.
Kule ngosi sithokozela umsebenzi owenziwa nguSolwazi uBonke Dumisa osekwenze umsebenzi wakhe ukuhlaziya abheke okwenzeka emakethe yezimali zamazwe ahlukene, nomthelela okunawo kulelizwe nakumabhizinisi. Akuvezayo ezinkundleni zokuxhumana kusabalalisa ulwazi oluqoqekile ngesimo somnotho, kusize ekuthatheni izinqumo eziphusile kosomabhizinisi. Kuleli sonto kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesine bekumi kanje ezimakethe:
NgoMsombuluko: ziziyisi-9 kuMandulo 2019
Usuku lwaqala lwethembisa ngoba irandi lalithe ukuba namandla uma siqhathanisa noLwesihlanu olwedlule lapho irandi lalimi e-R14,86 uma lilinganiswa nedola lase-USA. Kwavukwa irandi liyi-R14,78 uma liqhathaniswa nedola. Ngokubala kwethu singabona umehluko umncane kanti mkhulu uma kubalwa umnotho. Lokhu kubuyisa ithemba ngoba zibe ntathu zilandelana izinsuku idola lingaphansi kwamarandi ayishumi nesihlanu.
Uma irandi liqhathaniswa nopondo waseBrithani izimakethe zemali zivule lisimeme ngoba beliyi-R18,15, kube kuvalwe ngolwesiHlanu liyi-R18,32.
Uma liqhathaniswa ne-Euro imakethe yemali ivule kudingeka amarandi ali-16,30 ukuze kuphelele i-Euro elilodwa.
Kuqinisa ithemba ukubona intengo yegolide ilokhu ingaphezulu kwe-1500 zamadola. NgoMsombuluko kuvulwe imi e-R1510.
Amehlo athe njo sicabanga abakwaMoodys abahlola isimo sezwe, ukuthi leli lizwe liyaqhubeka yini lehle kuleli zinga elikulo lokuhlonipheka ngokomnotho, uma sebekhipha umbiko wabo enyangeni kaLwezi.
NgoLwesibili: zili-10 kuMandulo 2019
Izwe lihlalele ovalweni uma kucatshangwa ukuthi abakwaMoodys bayolibeka kuliphi izinga lelizwe emva kocwaningo lwabo. Uma kuke kwaba nezinkulumo ezithembisayo mayelana nesimo saseNingizimu Afrika, kuyaye kulekelele lithi ukusimama irandi uma liqhathaniswa nemali yakwamanye amazwe.
Inkulumo kaDkt uLucille Villa wakwaMoodys ayenze ngoLwesibili lapho ethi isimo seNingizimu Afrika siyethembisa uma kubhekwa izinga lokuhlonipheka ngokomnotho. Uphawule wathi izimpawu zinika ithemba lokuthi iNingizimu Afrika ingase ingehliselwa ezingeni lokulahlwa uma sekwenziwe ucwaningo, abakwaMoodys benika owabo umbono ngoLwezi. Lokhu kube nomthelela omuhle ezimakethe zemali, kwaba nalolu guquko:
Ngesikhathi sehora lokuqala emini ngoLwesibili bekudingeka amarandi ali-14,69 ukuze kuphume idola elilodwa. Ungoti ekuhlaziyeni ngomnotho uSolwazi uBonke Dumisa uchaza lesi simo njengesihle kakhulu ngoba selokhu sagcina ukuba kuleli zinga emasontweni ayisithupha edlule. Uma kuqhubeka kanjena kunika ithemba lokuthi kungase kwenze uphethroli nodizili kwehle emasontweni ambalwa ezayo ngoba leli lizwe lisebenzisa amadola aseMelika ukuthenga uwoyela. Ngokusho kukaSolwazi uDumisa irandi lithole amandla emva kokuphawula kukaSihlalo weBhangengodla lase-USA uJerome Powell othe kungakuhle i-USA keyibe nezinhlelo zokubhekana nezinkulumo ezingezinhle ezithinta umnotho nezwe i-USA.
Ekuseni kuvule imakethe kungekuhle phakathi kwerandi nopondo kodwa ngokuqhubeka kosuku lasimama irandi ngesikhathi sehora lokuqala bekudingeka amarandi ali-18,13 ukuze kuphume upondo owodwa.
Ngesikhathi sehora lokuqala ngoLwesibili irandi belisimeme sekudingeka amarandi ayi 16, 21 ukuze lilingane ne-Euro.
Ezithande ukwethusa ngezokwehla kwentengo yegolide yafinyelela kumadola ayi-1 300 yabuye yasimama lashona seyibuyele emadoleni ase-USA ayi-1495.
NgoLwesithathu: mhla zili-11 kuMandulo 2019
Amazwi amnandi aphume emlonyeni kaSekela Mengameli weMoodys uDkt uLucille Villa agcizelela ukuyethemba iNingizimu Afrika ukuthi inozinzo uma iqhathaniswa namanye amazwe asezingeni layo. Uzwakalise ithemba elikhulu lokuthi ngeke yehliselwe ezingeni lokulahlwa uma kubuyekezwa isimo sokwethembeka kwayo ngokuphathwa komnotho.
Imakethe yemali ivule ekuseni ikhombisa irandi lisimeme uma liqhathaniswa nedola. Kudingeka amarandi ali-14,62 ukuze lilingane nedola. Lokhu kunika ithemba elikhulu ngesimo somnotho samanje. Ngesikhathi esifanayo ngonyaka odlule wezi-2018 kwakudingeka amarandi ali-15,18 ukuze kulinganiswe nedola.
Uma seliqhathaniswa nopondo waseBritain likhombisa ukusimama irandi ngoba emini ngoLwesithathu bekudingeka amarandi ali-18,07 ukulinganisa nopondo. Uma sibheka onyakeni owedlule wezi-2018 lapho kwakudingeka amarandi ali-19,79 ukuze kulingane nopondo waseBritain. Lokhu kukhombisa ukuthi izinga lalo nyaka lingcono kakhulu kunelangonyaka owedlule.
Liqhubekile nokusimama irandi lafinyelela lapho kudingeka amarandi ali-16,16 ukuze kulingane ne-Euro. Ngonyaka owedlule kwakudingeka amarandi ali-17,60 ukuze kulingane neYuro.
NgoLwesiNe: mhla zili-12 kuMandulo 2019
Balale ubuthongo obumnandi ababheka isimo somnotho basizakale kuso ngoba ezimakethe ezahlukene zemali belikhombisa ukusimama irandi. Kuvulwe namuhla eyodwa kuzimakethe zemali ithe ukusimama uma iqhathaniswa nerandi.
Kuthande ukwethusa ukuthola ukuthi imakethe ivuna idola elithe ukwenyuka uma liqhathaniswa nayizolo. Imakethe ivule kudingeka amarandi ali-14,64 ukuze lilingane nedola. Enye imbangela yalokhu yizingxoxo okuzwakala ukuthi i-USA izibambe ekusithekeni neChina. Kuyezwakala futhi ukuthi kunezingxoxo i-USA ezibambe ne-Iran. Uma kuzwakala kukhona ukuvumelana phakathi kwala mazwe ngezinye zezinto ezibalulekile. Lokhu kunomthelela ekusimameni kwedola laseMelika.
Uma sibuka upondo lusaqhubeka ukhondolo lokusimama kwerandi. Imakethe yemali ivule upondo waseBritain ulingana namarandi ali-18,05.
Luqale usuku i-Euro liqhubeka nokuphila amandla selilingana namarandi ali-16,16.
Intengo yegolide ikhombisa ukusimama ngoba siqale usuku imi e-1 494 okuthanda ukuba ngconywana kunangoLwesithathu.
Izingxoxo eziqhubekayo phakathi kwe-USA nala mazwe amabili sengathi yikho okwenza intengo kawoyela yehle, okuthanda ukuqinisa ithemba lokuthi ungase yehle nentengo kaphethiloli nodizili.